Umthetho wosapho | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: Umthetho wesizwe
Ziziphi iimbopheleleko zomhloli wesantsha malunga nomntwana obhalisiweyo?
Luthini uxanduva lomhloli wemicimbi yolutsha ngokunxulumene nomntwana obhalisiweyo? Ebomini, kuvela ukuba ngabazali kuphela ababethwayo. Thetha kwaye ubhale imizuzu. Umsebenzi womhloli ulawulwa ...
Indlela yokujonga ukuba ayinakwenzeka
Indlela yokubhengeza ukuba ungafanelekanga "Inkqubo" inde kakhulu. 1. Ukuya enkundleni. 2. Uvavanyo lwengqondo (isigulana okanye isigulana) 3. Ukwamkelwa kwesigqibo senkundla (ukwamkelwa njengongakwaziyo ukusebenza okanye ukwala ukubhengeza ukuba akanako) Ngokubanzi ...
Indlela yokubhala ibango le-alimony.
Ungayibhala njani ingxelo yebango yesondlo. Ifom kunye neemfuno zesiteyitimenti sebango zinikwe kubugcisa I-131 yeKhowudi yeNkqubo yoLuntu yeRussian Federation; Kuya kufuneka ubonakalise: 1) igama lenkundla apho kuthunyelwa khona isicelo; ...
Indlela yokufumana ukuba umntu utshatile okanye akunjalo?
Wazi njani ukuba umntu utshatile okanye akatshatanga? Idesika enye yolwazi-HAYI, kodwa kufanelekile ukuya kwi-ofisi yobhaliso ekufutshane nepasipoti-baya kukufowunela kwaye baya kukuxelela ...
inkxaso yezingane ngaphandle komtshato
Ndisandula ukugcwalisa inkxaso yomntwana ngaphandle koqhawulo-mtshato kumantyi, kodwa ukuba akukho mpikiswano ngendawo ahlala kuyo umntwana, inkundla iya kuba kwicala lakho.
Indlela yokubeka umntu ogula ngengqondo esibhedlele?
ukufaka umntu ogula ngengqondo esibhedlele? 1 okanye ngesigqibo senkundla 2. okanye ngemvume yakhe yobuqu. Ngokuhambelana noMthetho weRussian Federation "Kwezonyango lwengqondo kunye nakwiziqinisekiso zamalungelo abemi kwi ...
h.1 Art.157 UK RF Ukukhuselwa okubi kwe-alimony.
Icandelo 1 leNqaku 157 leKhowudi yoLwaphulo-mthetho yeRussian Federation Ukuphepha ngolunya isondlo. Kwiminyaka eli-10 ukuya kwengama-15, mhlawumbi umntwana wakho uyokufumana umsebenzi owaziwayo kwiziko likarhulumente elaziwayo, kwaye ngexesha lokujonga okhethekileyo kuvela ukuba utata ulingo ..
Yintoni i-UFC? Esi sisinongo se-Ofisi kaNondyebo wase-Russia (uNondyebo wase-Russia) iqumrhu elilawulayo lomanyano (lenkonzo yomdibaniso), ethi, ngokuhambelana nomthetho we-Russian Federation, yenze imisebenzi yokunyanzeliswa komthetho ukuqinisekisa ukwenziwa kohlahlo-lwabiwo mali, imali ...
Yithi, phantsi kweyiphi imeko ubaba angamthatha umntwana kumama ngexesha lomtshato?
Ndixelele, phantsi kwaziphi iimeko apho utata angammangalela umntwana kunina kwimeko yoqhawulo-mtshato? Ukuba isikhundla sakhe sithandeka ngakumbi ngokoluvo lwenkundla. Yonke into iphantsi kakhulu !!! Ngapha koko, amathuba anyuka ngokubonakalayo ukuba ukhetha ngokukhawuleza ...
I-Alimony ibalwa ukusuka kumvuzo opheleleyo okanye sele sele userhafu?
Ngaba i-alimony incitshisiwe kumvuzo opheleleyo okanye sele irhafu? Kwaye inkxaso yesondlo nayo iyasuswa emvuzweni? Umzekelo umvuzo wama-15, apho i-alimony idonsa i-000%. Kuphela emva koko irhafu ibalwa ...
Ngokwesiqendu se-69, i-RF CC inokuthi iyancitshiswa inkundla, kwaye yimaphi amaxwebhu adingekayo?
Ngokusekwe kwinqaku lama-69 le-RF IC, kunokwenzeka ukuba kuhluthwe ubatata enkundleni, kodwa ngawaphi amaxwebhu afunekayo? Isatifikethi sokuzalwa, ipaspoti kunye namaxwebhu abonisa ibango lakho. Inqaku 69. Ukuhluthwa ...
Nceda nceda! Indlela yokubhala inkcazo yomzali womntwana oya kwi-kindergarten.
ndincede Nceda! Ungayibhala njani inkcazo yomzali womntwana ohamba enkulisa. "Iimpawu" ligama ngokwalo (elibhalwe embindini wetshati) Kwikona elungileyo, kufuneka ubhale ifom, njengoko kufunwa kwi-D / s Ke kwaye ubhale ...
Unokufumana njani imali yokugcina imali yomntu osweleyo?
Uyifumana njani imali yepenshini yesihlobo sakho esingasekhoyo? ungayifumana njani ipenshini katata oswelekileyo kumbutho ongajonganga nzuzo we-pension fund atomgarant yeyiphi imali ehlawulwa kulowo ubhubhileyo ukuba wazalwa ngo-1974 kwaye wasweleka ngo-2012 ...
Ziziphi izizathu ezinokunciphisa amalungelo omama?
Zeziphi izizathu abanokuthi bahluthwe amalungelo abo oomama? Ubugcisa. I-69 SK RF-Abazali / omnye wabo / unokuhluthwa amalungelo obuzali ukuba: uphepha imisebenzi yabazali, kubandakanya xa ...
emva kokufa komnye wabalingani abadla ifa lezindlu? umfazi nabantwana. okanye ekuqaleni komfazi, kwaye emva kokufa kwakhe sele sele
emva kokusweleka komnye wabalingane, ngubani ozuza ilifa lendlu? unkosikazi, umyeni nabantwana. okanye ekuqaleni kwenkosikazi, umyeni, nasemva kokusweleka kwakhe, abantwana, iqabane lomtshato, abazali bomfi sele bengabantwana.
Ungabhala njani impendulo kwisitatimende sebango lakho?
Uyilungiselela njani impendulo kwingxelo yebango ngokwakho? oku kubizwa ngokuba kukuphononongwa. ... bhalela igama lejaji ekuxoxwa ngayo ityala, bonisa ummangali, ummangalelwa, emva koko, nangayiphi na indlela, chaza eyakho ...
Ndiyakwazi ukutshintsha isithandwa sami kwintombi emva komtshato? kunye nawaphi amaxwebhu apho unokufaka khona?
Ndingayitshintsha ifani yam ibe ligama lobuntombi bam emva konyaka uqhawulo-mtshato? kwaye ngawaphi amaxwebhu wokufaka isicelo? Unga! Ukuqala, nxibelelana neofisi yobhaliso, emva koko-kwiqumrhu lommandla we-FMS ye-Russian Federation ...
Ziziphi iimpepha ezifunekayo ukuze kubhalise ukugcinwa kwemali?
Ngawaphi amaxwebhu ayimfuneko ekubhaliseni ukuba ngumlondolozi? Okuninzi kwe. Kuya kufuneka uye kugcino kwaye uya kunikwa uluhlu, unikwe izicelo kwimibutho ethile kwaye unikezwe ukugqithisa imed. Nceda. ...
Babhatala malini umntwana okhulisa umntwana ongengowabo? ... Isixa sentlawulo kunye nezibonelelo zomntwana okhulisa umntwana ongengowakhe
Babhatala malini abantwana abakhulisa umntwana ongengowabo? ... Imali yentlawulo kunye nezibonelelo zomntwana okhulisa umntwana ongamzalanga
Xa uqhawula umtshato kufuneka wenze isicelo ngokukhawuleza ukuba ukwahlukana kwepropati? Kwaye ungakwenza emva koko, emva kokuqhawula umtshato? Kangakanani?
Ngaba kufuneka ufake ifayile yokwahlulwa kwepropathi ngokukhawuleza xa kufuneka uqhawule umtshato? Ngaba ungayenza kamva, emva koqhawulo-mtshato? Ingaba ithatha ixesha elingakanani? Umda wokwahlulwa kwepropathi phakathi ...
Imibuzo ye-77 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,897.